4 waa inuu lahaadaa alaabada safarka | Ragga Stylish
Qalabka saxda ah ee safarka ayaa isbeddel sameyn kara labadaba waqtiga xirxirashada iyo hal mar goobta aad ku socoto.
Intaa waxaa u dheer fududeynta hawsha xirxirashada - oo hadda u dhow farshaxan - waxay ilaaliyaan alaabtayada inta safarka lagu jiro. Intaa waxaa dheer, naga caawi sidii aan u heli lahayn wax kasta oo ka wanaagsan, iyadoo la ilaalinayo waqtiga iyo waqtiga taas oo ka dhigan. Kuwa soo socdaa waa qaar ka mid ah waxyaabaha lagama maarmaanka ah:
1 Bacda musqusha oo weyn
2 Baasaboor haysta
3 Abaabulaha qalabka elektarooniga ah
4 Boorsada kabaha
Bacda musqusha oo weyn
Ha ku gaabin cabirka boorsadaada musqusha. Waxaad keydin doontaa booska waxaadna yareyn doontaa tirada xirmooyinka shandadaada haddii alaabtaada nadaafadda oo dhan waa inaad dhigataa hal meel, laga bilaabo kareemada illaa makiinadda mandiilka, iyada oo la marayo cadayga. Moodelkan, oo lagu iibinayo Mr Porter, wuxuu leeyahay gudaha si fudud loo nadiifin karo, halka banaanka laga sameeyay maqaar qaali ah oo loogu talagalay nolol dheer.
Baasaboorka heysta waa inuu lahaadaa alaabada fasaxa. Habka ugu fiican ee aad u ilaalin karto baasaboorkaaga iyo kaararkaaga deynta labadaba nabadgelyo markaad safreyso. Sharad ku daydo fudud, laakiin xarrago leh, sida ku dhacday baasaboorkan haysta shirkadda Antonio Miró.
Abaabulaha qalabka elektarooniga ah
Ku keydi dhammaan aaladaha yaryar ee elektaroonigga ah, iyo sidoo kale fiilooyinkooda iyo xeedho, hal kiis oo leh dhowr qaybood. Xoog, fudeyd iyo fududahay in la qaado, ayaa kuu oggolaan doonta inaad si ammaan ah u ilaaliso oo aad si fudud oo dhakhso leh ugu soo gasho markaad u baahatid iyaga.
Qalab muhiim u ah safarka kabahaaga ugu jilicsan ka ilaali xagashada iyo cilladaha inta safarka lagu jiro. Sidoo kale waxaa laga heli karaa Mr Porter.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Qalabka safarka ee lagama maarmaanka u ah fasaxyadaada
Muhiimadda ay leedahay in la helo saladh xagaaga